सम्भव छ, निधिको उम्मेदवारीले रुखलाई छरितो बनाउनसक्छ – BP Bichar
Home›नेपाली कांग्रेस›सम्भव छ, निधिको उम्मेदवारीले रुखलाई छरितो बनाउनसक्छ
आगामी नोभेम्बरमा हुने अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनअघि आफ्नो आधिकारिक उम्मेदवार प्रस्तुत गर्न डेमोक्र्याटिक पार्टीको राष्ट्रिय अधिवेशन प्रारम्भ भएको छ । १२ वर्षअघि डेमोक्र्याटिक पार्टीको राष्ट्रिय अधिवेशनको सम्झना मेरो मानसपटलमा अझै ताजा छ ।
त्यो अधिवेशनको अन्तिम दिन सो पार्टीबाट राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार बाराक ओबामाको उम्मेदवारी स्वीकार गर्ने भाषणबाट म अत्यन्तै तरङ्गित भएको थिएँ । अमेरिकाको २०६५ भदौ १२ गते राति ओबामाले त्यो भाषण गर्दा नेपाली समयअनुसार भाद्र १३ गते बिहान भइसकेको थियो ।
ओबामाको राष्ट्रपतिको उम्मेदवार स्वीकार गर्ने त्यो वक्तव्य अत्यन्तै प्रभावकारी थियो । एक त अमेरिकामा पहिलोपटक प्रमुख राजनीतिक पार्टीको तर्फबाट एकजना अश्वेत व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार प्रस्ताव गरिँदै थियो । त्यसमाथि उम्मेदवारीलाई अझ सबल रूपमा प्रस्तुत गर्न मार्टिन लुथर किंङले अत्यन्त लोकपि्रय भाषण गरेको ४५ वर्ष पूरा भएको वर्षगाठको दिन रोजिएको थियो ।
मार्टिन लुथर किङ अश्वेत, विशेषतः अफ्रिकी मुलुकका अमेरिकी नागरिकको अधिकारका लागि अग्रपङ्क्तिमा संघर्ष गरेका नेता हुन् । रंगभेद, जातीय विभेदविरुद्धको आन्दोलनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यक्तिका रूपमा उनको पहिचान अमेरिकामा मात्रै होइन विश्वमै व्याप्त छ । उनको सर्वाधिक लोकपि्रय भाषण भनेर ‘आइ हृयाभ अ ड्रिम’ (मेरो सपना छ) लाई मानिन्छ । त्यो भाषणको मूल सार भनेको ‘सबै मानिसहरू बराबर छन् भन्ने कुरा स्वतःस्पष्ट सत्यका रूपमा स्वीकार गर्ने हाम्रो मुलुक अमेरिका निर्माणको आर्दशलाई सम्झँदै हामी एकदिन ब्युँझने छौं र त्यस आदर्शको पक्षमा उभिनेछौं । त्यस्तो दिन आउने छ, अवश्य आउने छ, ‘मेरो त्यो सपना छ’ भन्ने थियो ।
प्रधानमन्त्री भएको १८ महिना नपुग्दै राजा महेन्द्रले सैन्य बलले ‘कू’ गरेर वीपीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाएर हुकुमी शासन मात्रै सुरु गरेनन्, विनाकारण वीपीलाई ८ वर्ष थुनेर पनि राखे । वीपीसँगै गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईलगायत थुप्रै प्रजातन्त्रवादी नेताहरूलाई थुनेर महेन्द्रले सुरु गरेको पञ्चायती व्यवस्थालाई फ्याँक्न नेपालले ३० वर्ष संघर्ष गर्नुपर्‍यो । प्रजातन्त्र नखोसिएको भए नेपाल अहिलेसम्म कस्तो भइसक्थ्यो होला भन्ने लागिराख्छ ।
केन्द्रीय कार्यसमितिको त्यो बैठकमा मैले उदाहरण दिएका अर्का व्यक्ति थिए-४९ वर्षको उमेरमा निर्वाचित भएर त्यो बेला बहालमा रहेका अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री केविन रड ।
हुन त उमेरको सीमाबन्दी नेतृत्वका लागि सर्वमान्य वा अचुक औषधि होइन । अमेरिकामा पनि सन् १९९२ देखि लगातार २४ वर्षसम्म तुलनात्मक रूपमा युवा राष्ट्रपतिको शासन कालपछि अमेरिकाले पनि ७० वर्षे डोनल्ड ट्रम्पलाई २०१६ मा राष्ट्रपति निर्वाचित गर्‍यो । अहिले ७७ वर्षीय जो बाइडेनलाई राष्ट्रपति निर्वाचनमा चुनौती दिँदैछन् ।
उमेरले मानिसमा बुद्धिमत्ता र परिपक्कता ल्याउँछ, तर उमेरले राजनीतिक नेतृत्वका लागि अपेक्षित क्रियाशीलता र सतर्कताले विस्तारै विस्तारै असम्भव जस्तो बनाइदिन्छ । कोही अपवाद हुन्छन्, जस्तो-गिरिजाप्रसाद कोइराला । अहिले मलेसियामा महाथीर छन् ।
नेतृत्वमा उमेरको सीमाबन्दीको कुरा मैले केन्द्रीय कार्यसमितिमा त्यसबेला राखेको विचार र अहिले मेरो महत्वकांक्षालाई मेलमिलाप गर्न मैले पार्टीको एउटा वैधानिक व्यवस्थालाई सैद्धान्तिक आधार बनाउने बहाना पाएको छु । हाम्रो पार्टीमा लामो समयदेखि निरन्तर योगदान पुर्‍याउँदै आएका तर वर्तमानमा पार्टीको कुनै पनि पदीय जिम्मेवारीमा नरहेका ६५ वर्ष नाघेका व्यक्तिलाई जेष्ठ राजनीतिज्ञ सभामा राख्न सकिन्छ । जेष्ठ राजनीतिज्ञ सभामा भएको व्यक्तिले पार्टीलाई सल्लाह, सुझाव र प्रेरणा दिने भनेर हामीले लेखेका छौं ।
नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण बढ्दो छ । कोरोनाले यस्तो रूप लेला भन्ने लागेको थिएन । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)को अनुमान पनि नेपाल १५ सयदेखि १० हजार संक्रमित हुन्छन् भन्ने थियो । तर तीन महिनाको लकडाउन र त्यसपछिको डेढ महिनामा सरकारले आफ्नो क्षमता बढाउँदै कोरोना संक्रमणसँग जुध्ने तयारी गर्नुपर्थ्यो । तर त्यो गरेन ।
हाम्रो पार्टीका सभापति वा त्यो नभए दोस्रो, तेस्रो पदका आकांक्षी नेताहरू पनि कोरोनाप्रति गम्भीर भएको देखिएन । उहाँहरू यस्तो हतारो गर्नुहुन्छ कि आजै पार्टी अधिवेशन गरेर कामधाम सुरु गरिहालौं । कोरोनाको संक्रमणमा पनि उहाँहरूलाई १०/१५ दिन, महिना दिनमै महाधिवेशन गरिहालौं जस्तो हतारो छ ।
अहिले कोरोना संक्रमणसँग जुधौं, यसले महाधिवेशन ५/७ महिना त्यस्तै तलमाथि पर्ला तर, महामारी सकिएपछि स्वाभाविक तरिकाले राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने पनि सोचाइ पनि राख्नु भएन । किनभने अब ढिलो गर्‍यो भने त मेरो पालो सकिएला कि भनेर आत्तिनु भएको छ । ‘टाइम इज रनिङ आउट फर मी अर्थात् मैले अहिले च्याप्पै समातिहालिन भने यो पद कहिल्यै प्राप्त हुँदैन । राजनीतिभन्दा बाहिरको जीवनमा जानुपर्ने बाध्यता आँखै अगाडि आइसक्यो’ भन्ने मानसिकता लिएर हिँडिरहेका छौं ।
हामी यस्तो बेलामा महाधिवेशनमा होमिएका छौं, जतिबेला नेपालमा कम्युनिस्ट शासन दिन प्रतिदिन जनता र आफैँभित्र समेत विश्वासको संकट बोकेर चलिरहेको छ । केहीदिन अगाडि मात्रै प्रधानमन्त्रीले ‘सरकारलाई बदनाम गर्ने केही मान्छेको पेसा नै बन्या छ, कामै यही हो, त्यति काम गर्छ, केका लागि गर्‍या छन् र कसका लागि गर्‍या छन् बुझ्या छैनौं’ भन्नुभयो ।
त्यसरी सरकार असहिष्णु हुँदै जाँदा र कम्युनिस्ट पार्टीले देखाएको सपना पूरा नहुँदा आमजनताको बीचमा ठूलो निराशा देखिनसक्छ । त्यो निराशाले ‘इनफ इज इनफ’ जस्तै आन्दोलन जन्माउँछ । त्यही आन्दोलनलाई हेरौं न, अब त अति भयो भनेर सरकारको असंवेदनशीलताविरुद्ध १८/१९ वर्षका केटाकेटीहरू आन्दोलनमा आए ।
उहाँले जिल्ला-जिल्लामा प्रवेश गराएको अथवा क्रियाशील सदस्यता बाँडेका कुराहरू, पार्टीका सबै गतिविधिहरू, भातृ-भगिनी संस्थाहरूको सञ्चालन अथवा यी सबै गतिविधिहरूले काँग्रेसलाई आमनागरिकका बीचबाट कांग्रेस अलि दिन बेग्लै किल्लामा वा बेग्लै टापुमा बसे हुन्छ जस्तो देखिएको छ । सभापति पदमा चुनाव जितौंला अनि, टापु बाहिर अम नागरिकका बिचमा जाउँला भन्ने सोचे जस्तो लाग्छ ।
तर यसरी छुट्टै टापुमा गएर बस्नुभन्दा आगामी चुनावमा कांग्रेसलाई आमजनतामा कसरी लिएर जाने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण होला । अहिले देउवा सभापति हुँदा देशले जुन अवस्था भोगेको छ । अबको महाधिवेशनले फेरि उनैलाई दोहोर्‍याउँदा देशको समस्या समाधान गर्न सक्ने पार्टी काँग्रेस बन्ला कि नबन्ला ?
कांग्रेसमा सभापतिकै लागि ४/५ जना उम्मेदवार हुन सक्छन् । ४/५ जना उम्मेदवार भयो भने महामन्त्री र उपसभापतिका लागि पनि ८/१० जनाको उम्मेदवारी आउँछ । त्यो बाटोले कांग्रेसलाई बिगार्छ जस्तो लाग्दैन ।
दोस्रो, २०/२५ जना नेता सभापति, महामन्त्री र उपसभापतिमा लड्दा गुटगत उम्मेदवारी सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ । कांग्रेसमा ०४६ सालयता कतिपय समूहका मान्छेहरू यताको त्यता र त्यताको यता आए होला, म पनि यतातिर छु । कोही मान्छे यताका उता पुगे होलान् । तर गुट अहिलेसम्म पनि स्थायी प्रकृतिकै छ ।
तर २०/२५ जना चुनाव लड्ने, २० जना जति रिटायर्ड गर्ने, ५ जनाले चुनाव जित्ने हो भने एउटै गुटका मान्छेले जित्दैन । ५ वटा मुख्य पदमा ४/५ वटा गुटका उम्मेदवारले जित्लान् । त्यसो भयो भने स्थायी प्रकृतिको गुटबन्दी सकिन्छ र यसले पनि रुखलाई छरितो बनाउँछ । आउने दिनमा कांग्रेस जनताको भरोसायोग्य पार्टी बन्न सक्छ ।
तर रामचन्द्र पौडेलजीले भन्नुभयो- ‘मिनेन्द्र ! आउने दिनमा शेरबहादुरजीलाई सजिलोसँग फेरि सभापति बन्नलाई तपाईं बाटो मात्रै खोल्नुहुन्छ । यसरी खुला गरेर जसले पनि सदस्यता पाउने बनाइयो भने उहाँले सदस्यता बाँडेको बाँड्यै गरेर आउने महाधिवेशन सजिलै जित्नुहुन्छ, यसो नगर्नुस् ।’
त्यो व्यवस्था १४ औं महाधिवेशनमा यो व्यवस्था लागू हुन नसके पनि महाधिवेशनपछि लागू होस् भन्ने लाग्छ । किनभने, कांग्रेस आमनागरिकको पार्टी बन्नुपर्‍यो । आम नागरिकको पार्टी बन्नुको अर्थ नागरिकको मनमा भएको कुरा कांग्रेस पार्टीमा सहजै प्रवेश हुन सकोस् । कांग्रेसले सोचेको कुरा आमनागरिक कहाँ पुगेर छलफलबाट टुङ्गोमा पुगोस् । आमनागरिकले कांग्रेसलाई प्रभावित गर्ने, कांग्रेसले आमनागरिकको सोचलाई प्रभावित गर्ने वातावरण होस् ।
कांग्रेसको आन्तरिक कलहका कारण तल्लो तहको कार्यसमिति गठन प्रभावित
कांग्रेस महासमिति बैठक : आशा र आशंका
वी. पी. विचार राष्ट्रीय समाजका महा सचिव श्री विनय ध्वज चन्द भन्नु हुन्छ देउवा-पौडेल नेतृत्वको असफलता स‌ंगै अबको ...
दिवंगत काँगे्रस नेता बास्तोलाको आज अन्तेष्टि गरिने
विपक्षको विरोध कमजोर हुँदैमा सरकारको काम प्रभावकारी भएको सिद्ध भने हुँदैन